An’hetsiny No Nanjohy Ny Fanentanana Notarihan’ireo Vehivavy Saodiana Mba Hamaranana Ny Fiahian’ny Lehilahy Ao Amin’ny Fanjakàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2016 7:13 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, русский, Español, Français, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Human Rights Watch ‘Gadra – Farano ny Fiahian'ny lehilahy ao Arabia Saodita’. Loharano: Lahatsary YouTube
Ho ampahany amin’ireo ezaka ho famaranana ireo lalàna dragona mamely ireo vehivavy ao amin'ilay Fanjakana Golfa, nandefa fanentanana iray ireo vehivavy saodiana nitakiany fampitsaharana ny fiahiana ataon'ny lehilahy mikasika ny fomba fanao fototra, toy ny asa, ny fanànana ary ny fivezivezena.
Tamin'ny fampiasana tenifototra #TogetherToEndMaleGuardianship (miaraka hamarana ny fiahian'ny lehilahy) sy ny dikany amin'ny fiteny arabo #سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية (izay midika hoe ‘angatahan'ireo vehivavy Saodiana ny fampitsaharana ny fiahiana’), an'hetsiny ireo mpanohana eran'izao tontolo izao no nandray anjara tamin'io fanentanana io.
Notohanan'ny Human Rights Watch ilay fanentanana ary narahan'ny famoahana ny tatitra lavabe avy aminy mitondra ny lohateny hoe “Voahidy anaty boaty: Ireo vehivavy sy ny Rafitra Fiahian-dehilahy ao Arabia Saodita“. Ao anatin'io tatitra io, hazavain'ilay fikambanana iraisampirenena mpiaro zon'olombelona fa:
Ao Arabia Saodita, ataon'ny lehilahy iray andry maso mandrakariva ny fiainan'ny vehivavy iray manomboka izy teraka ka mandra-pahafatiny. Isaky ny vehivavy Saodiana iray dia tsy maintsy manana lehilahy iray mpiambina azy izy, raha ny tokony ho izy dia ny ray na ny vady, nefa amin'ireo tranga sasantsasany dia ny anadahiny na ny zanany lahy, izay manana fahefana hanapaka hevitra goavana amin'ny anarany. Araka ny voalazan'ireo vehivavy saodiana an'hetsiny tamin'ny Human Rights Watch, tena sakana goavana amin'ny fampiharana ny zon'ireo vehivavy ao amin'ny firenena ny rafitra fiahian-dehilahy, izay mahatonga ireo vehivavy lehibe ho vehivavy tsy ampy taona araka ny lalàna ka tsy afaka mandray ireo fanapahankevitra manandanja ho azy manokana.
Ahitàna lahatsary telo fohy ilay tatitra, mampiseho ireo fiantraikan'ilay rafitra eo amin'ny fiainan'ireo vehivavy, ary koa ireo fanambaràna avy amin'ireo mahery fo mpiaro ny zon'ireo vehivavy Saodiana sy ireo olom-pirenena izay mahita ilay lalàna ho sakana manangoly ara-tsosialy sy ara-toekarena.
Araka ny nolazain‘ny Saodiana iray mpikatroka sady lehiben-tsekoly fahiny, Hayat, 44 taona, tamin'ny Human Rights Watch ny 7 Desambra 2015 fa:
Misy fiantraikany ihany koa amin'ny fahafahan'ireo vehivavy hitady asa ao Arabia Saodita sy ho afaka hitsapa ny vintany any ivelany izay mety hampandroso ny asan'izy ireo ilay rafitra fiahiana. Tsindriana manokana amin'izany, ireo vehivavy tsy afaka misoratra hahazo pasipaoro raha tsy misy fankatoavan'ny lehilahy mpiahy azy ary itakiana fanomezandàlana hivezivezy ivelan'ny firenena. Tsy afaka mahazo vatsim-pianarana avy amin'ny governemanta hianarana any ivelany ihany koa ireo vehivavy raha tsy misy ny mpiahy manamarina, sady na dia tsy ampiharina foana aza izany, dia mitaky havana lahy iray hiahy ofisialy mba hanaraka azy ireo mandritra ny fianarany.
Mety hanakorontana ny sainao sy ny fomba fahitanao ny tenanao io. Ahoana no hanajanao ny tenanao na ahoana no [hahafahan'ny] fianakavianao hanaja anao, raha izy no mpiahy anao eo anatrehan'ny lalàna?
Nanazava ihany koa ny Human Rights Watch fa imbetsaka nandalo sedra ireo hevitra ara-pinoana heverina fa manamarina ny rafitra fiahian-dehilahy.
Ny fametrahan'i Arabia Saodita ny rafitra fiahiana dia nifototra tamin'ny fandikàna hevitra tena tery mikasika ny andalana iray faran'izay mnjavozavo ao anaty Korany – fandikàna iray notoherin'ireo vehivavy Saodiana ampolony, anisan'izany ireo mpampianatra sy ireo Islamika mpiaro ny vehivavy, izay niresaka tamin'ny Human Rights Watch. Toherin'ireo manam-pahaizana ara-pivavahana ihany koa ilay fandikàna, anisan'izany ny Saodiana iray, mpitsara taloha, izay nilaza tamin'ny Human Rights Watch fa ny faneren'ny firenena ny fiahian-dehilahy dia tsy takian'ny Sharia ary tsy nahazo fanomezam-pahefàna avy amin'ny lalàna Islamika tamin'ny 2013 ilay lehiben'ny polisy ara-pinoana taloha, izay manampahaizana ara-pivavahana manana ny hajany ihany koa, nilaza ny fandraràna ao Arabia Saodita ny fitondran'ireo vehivavy fiara.
Izany no mahatonga fanoherana ny rafitra fiahian-dehilahy, ankoatra ireo antony maro hafa – ao amin'ny Twitter sy any an-kafa- ataon'ireo vehivavy Saodiana sy ireo mpanohana azy ireo. Araka ny voalazan'ny Vicativ, hatramin'ny 4 Aogositra 2016 teo, farafahakeliny 170.000 ireo bitsika nalefa tamin'ny teny Arabo sy Anglisy.
Nanoratra i Ghada Al Zahrani izay mibitsika amin'ny @hanoohopi hoe:
Mijaly vokatry ny karazana famonjàna faran'izay ratsy indrindra ireo vehivavy Saodiana
Nanipika i Maram Mohammad Al Ajlan, Saodiana mpampiasa Twitter, fa indroa nampanantena hampitsahatra ny fiahian-dehilahy i Arabia Saodita, tamin'ny taona 2009 sy tamin'ny taona 2013.
Miandry foana izahay… Indroa nampanantena ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Mpiaro Zon'Olombelona i Arabia Saodita (2009 sy 2013) fa hamarana ny rafitra fiahian-dehilahy.
Ri, izay mibitsika amin'ny @ipergh, nizara sary rangodrangotra nataony tamin'ny rindrina irao tao Riyadh, izay mivaky hoe “Takianay ny fianjeran'ny fiahian-dehilahy an'ireo vehivavy Saodiana”:
Izaho ihany no nanao an'io ary.natifitro teo amin'ny rindrin'i Riyadh. Amin'ny anarako sy amin'ny anaran'ny Saodiana tsirairay mpitolona
Nibitsika ho an'ireo mpanaraka azy maherin'ny 20.000 i Abdullah Moqhem Al Moqhem hoe:
Ny fangatahan'ireo vehivavy mba hampitsaharana ny fiahian-dehilahy dia tsy midika ho fisarahan'ireo vehivavy amin'ny vadiny, amin'ny rainy na amin'ireo anadahiny, tsy akory. Ny zony mba hisafidy ny anjarany eo amin'ny fiainany no zo takian'izy rehetra.
Nozarain'i Mohammad Ali Mahmoud tamin'ireo mpanohana azy maherin'ny 35.000 ny fandresen-dahatra ananany fa:
Izayvehivavy iray izay mino tanteraka ny maha-olona azy dia hanao antso hamaranana ny fiahian-dehilahy fa raha toa vehivavy iray tsy manana izany dia hitaky ny hanohizana azy io..
Hajar, mibitsika amin'ny @chanhxo, no nilaza fa hiaro ny zon'ireo vehivavy tsy ijerena izay zom-pirenen'izy ireo.
Hijoro hiaro ny zon'ireo vehivavy aho mandra-pahafatiko. Na Saodiana izy na Afgàna, tsy hanaiky ny tsy rariny atao amin'ireo vehivavy aho.
Nahazo fanohanana iraisam-pirenena mafonja ihany koa ilay fanentanana. Nibitsika ny firaisankinany avy any Italia ny mpanoratra bilaogy iray ao amin'ny “The Paludians” hoe:
Firaisankina amin'ireo Vehivavy Saodiana avy aty Italia, afaka mitombo ao anatin'ny tontolo vaovao iray manaja anareo ny fanantenana, aty Eoropa ihany koa
Mpanoratra bilaogy, Pakistaney-Indiana i Dr. Ilmana Fasih, izay manoratra ao amin'ny ‘Blind to Bounds’, nanampy fa:
Firaisankina amin'ireo #vehivavin'i #Arabia Saodita avy amin'i #Kanadà#Pakistàna#India.
Mazava ho azy, tsy ny olona rehetra no ho faly amin'ilay fanentanana. Naharay tsikera sasantsasany ihany koa ilay tenifototra, indrindra indrindra avy amin'ireo lehilahy Saodiana mpifikitra hiringiriny izay nahita ilay hetsika hanomezana fahafahana an'ireo vehivavy tsy ho ambany fiahian-dehilahy ho toy ny ampahany amin'ny “fandaharam-potoana fanalalahana” mitondra amin'ny fahalovan'ny fiarahamonina :
Tsy mahasolo tena an'i Arabia Saodita sy ireo vehivavy Saodiana mihitsy ireo efa nalefa nandeha nanerana ireo tranonkalan'ny tambajotra media sy ireo haino aman-jery sosialy ataon'ireo tanora mpivarotena.
Tsy mahagaga ireo fomba fijery ireo, raha ny fiheverana fa nitàna ny laharana faha-134 amin'ny firenena 145 i Arabia Saodita tao amin'ny tatitry ny Global Gender Gap avy amin'ny Fihaonambe Ara-Toekarena Erantany 2015, kanefa tohizan'ireo vehivavy Saodiana ny miady ao anaty fanantenana hoe hiova tsy ho ela ny trangan-javatra misy.